युएईबाट परिवारसंग बस्न आएका बाबुरामको कोरोनाको आशंकाका कारण यसरि भयो दु:खद निधन ! – Nepal Insider
मुख्य पृष्ठ /समाचार/युएईबाट परिवारसंग बस्न आएका बाबुरामको कोरोनाको आशंकाका कारण यसरि भयो दु:खद निधन !
युएईबाट परिवारसंग बस्न आएका बाबुरामको कोरोनाको आशंकाका कारण यसरि भयो दु:खद निधन !
बुटवलको कोरोना अस्पतालमा यही चैत १६ गते ज्या-न गुमाएका पाल्पा रिब्दीकोटका बाबुराम थापाको श-व ११ दिनपछि परिवारले बुझेको छ । आज भएको सर्वपक्षीय बैठकले राहत दिने निर्णय गरेपछि श-व उठाउन परिवारजन सहमत भएका हुन् ।उपचारमा लापरवाही भएको भन्दै परिवारले क्षतिपूर्ति माग गरी शव उठाउन मानेका थिएनन् । प्रदेश नं ५ को सामाजिक विकास मन्त्रालय, बुटवलमा क्रियाशील सामाजिक संस्था र मृ-तकका आफन्तबीच भएको छलफलमा श-व उठाउने सहमति भएको हो ।प्रदेश सरकारको पहलमा मृ-तककी श्रीमतीलाई स्थानीय तहमा जागिर दिलाउने र दुई छोरालाई कक्षा १२ सम्म निःशुल्क पढाउने सहमति भएको बैठकमा सहभागी संविधानसभाका सदस्य विनोद पहाडीले जानकारी दिनुभयो । मृ-तकका परिवारलाई सामाजिक सङ्घ संस्थाले रु आठ लाख राहत दिने निर्णयसमेत भएको छ ।
दुवईबाट यही चैत पहिलो साता नेपाल फर्किएका थापा उपचारका लागि चैत १३ गते लुम्बिनी प्रादेशिक अस्पतालमा भर्ना हुनुभएको थियो । चैत १६ गते बुटवलको धागो कारखानामा बनाइएको कोरोना विशेष अस्थायी अस्पतालमा उहाँको ज्या-न गएको थियो । उहाँको कोरोना परीक्षण रिपोर्ट नेगेटिभ आएको थियो ।रुघा–खोकी र ज्वरो आएर अस्पताल भर्ना भएका आफ्ना पतिको उपचार नपाएरै निधन भएको दाबी रीताकोे छ । ११ दिन अघि आफैं रिक्सा चढेर हाँसीखुसी अस्पताल जानुभएका मेरा पतिलाई अस्पालले उपचारै नगरेर मारेको हो, मलाई न्याय चाहियो, गल्ती गर्नेलाइ कारबाही हुनुपर्‍यो,’ रीताले भनिन् ।
दाजु विमलले पनि भाइ बाबुरामको निधन को कारण अस्पतालले बताउनुपर्ने तथा दुई छोराको पढाइ खर्च र बुहारीलाई नोकरीको व्यवस्था गरिदिनुपर्ने बताएका थिए । ‘भाइ त अब फर्केर आउँदैन तर अस्पतालकै लापरबाहीले सहाराबिहीन भएकी बुुहारी र छोराहरुको त बिजोग हुनु भएन नि’, विमलले भने ।कोरोना नभएका मेरा पतिलाई किन अस्पतालमा थुनेर राखियो ? समयमै ल्याब परीक्षण गरी किन औषधि चलाइएन ? आफैं रिक्सा चढेर हाँसीखुसी अस्पताल गएका उहाँलाई अस्पालले उपचारै नगरेर मा-रेको हो । मलाई न्याय चाहियो भन्दै परिवारले श-व उठाएको थिएन ।रीताका अनुसार बाबुरामले अस्पतालका डाक्टर नर्सले हेरविचार नगरेको, खाना र पानीको समेत राम्रो व्यवस्था नभएको गुनासो मोबाइल फोनबाट गरेका थिए । ‘मलाई राखिएको कोठाको ढोकाबाट भित्र कोही पस्दैनन् ।ज्वरो नाप्ने थर्मोमिटर दिएका छन् । आफै नापेर टिपाउनुपर्छ’ खाना र औषधि पनि टाढैबाट हुत्याई दिन्छन् । तिमी चिन्ता नगर । उपचार त गर्नै पर्‍यो भन्नु हुन्थ्यो’, पतिसँगको फोनवार्ता उद्धृत गर्दै रीताले भनिन् ।
रीताका अनुसार बाबुरामले शनिबार साँझ साढे ८ बजेतिर उनलाई फोन गरी आफू छिट्टै निको भएर फकर्ने भन्दै चिन्ता नलिन र छोराहरुको ख्याल राख्न भनेका थिए । आइतबार बिहान आफूले फोन गर्दा पति आत्तिएपछि हतारहतार एम्बुलेन्समा अस्पताल गएको उनले बताइन् ।रीताका अनुसार अस्पताल पुगेपछि बिहान साढे ११ बजेतिर डाक्टरले बाबुरामकोे अवस्था गम्भीर भएको बताएका थिए । उनी एक्लै अस्पताल परिसरमा छ’टप’टा’इन् तर कसैले सान्त्वना दिएनन् । सकेसम्म स्वास्थ्यकर्मी उनीबाट तर्केरै हिँडे । दिउँसो एक बजे एक डाक्टरले ‘सरी, तपाईंका श्रीमानलाई बचाउन सकिएन भन्नु भयो’, रीताले भनिन् ।
कोरोना उपचार अस्पतालमा बाबुरामको निधन भएको खबर फैलिएपछि बुटवलमै रहेका आफन्त, छिमेकी र साथीसमेत त्यहाँ पुगेनन्। घरमा ६ र १० वर्षका दुई छोरालाई पनि पानी खान दिने कोही भएन। रीतालाई कसैले वास्ता नगरेको भन्दै आलोचना भएपछि लुम्बिनी प्रादेशिक अस्पताल विकास समितिले साँझ घर जाने गाडी व्यवस्था गरिदियो ।अर्को दिन सोमबार थापाको कोरोना परीक्षण रिपोर्ट नेगेटिभ आयो । ‘कोरोना नभएका मेरा पतिलाई किन अस्पतालमा थुनेर राखियो ? समयमै ल्याब परीक्षण गरी किन औषधि चलाइएन ?’ रीताको प्रश्न थियो । तर अस्पतालका डाक्टर र व्यवस्थापन पक्ष हेरिरहेको प्रादेशिक अस्पताल विकास समिति नाजबाफ बनेको थियो ।
‘को’रोनाबाट बच्न ६ महिना सिकाइसक्यौँ, अब आफैं जोगिनुस्’